Shabakada Alshahid | Archive | Faaqidaad
Home » Archives by category » Maqaallada » Faaqidaad
Mogadishu (Alshahid)-Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay Dood-Cilmiyeed ay soo qaban qaabisay Xarun lagu magacaabo Xarunta Falanqaynta Siyaasadaha oo ah Xarun magaalada Muqdisho ka dhisan. Doodda waxaa kasoo qayb galay Siyaasiyiin, Aqoonyahanno, Saraakiil hore oo Ciidamada ah, iyo Wax garad kale. Madaxda Xarunta ayaa ugu horeyn furay Doodda, waxayna markaa ka dib soo [...]
Talaabada aan qaadayno Midkii turun tureey maagan Tumaatida ku dhici doonta Taasina is waydiin leh! Ninka tuhunsan Soomaali baa tamar yarooow Inta aad dhib wayn taransan Aan talo ku siinee WARHOOY Timir laf baa ku jirta* Inkasta oo dadka Aduunyada ku nooli ay yihiin ood-wadaag isku baahan oo aan midkoodna midka kale uga maarmeyn hagaajinta [...]
Mogadishu (Alshahid)- Waxaa maalintii Khamiista ee lasoo dhaafay Hoolka Shirarka ee Xafiiska Xarunta Alshahid ay ku leedahay Muqdisho lagusoo gaba-gabeeyay Aqoon is waydaarsi Laba maalin socday oo ku saabsanaa Qorsheynta Istaraatiijiyadeed iyo sida loo diyaariyo. Aqoon is waydaarsiga waxaa kasoo qayb galay tiro ka mid ah Bahda Waxbarashada Somalia oo isugu jirtay Arday iyo aqoonyahanno [...]
Washington (Alshahid)- Doorashadii madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa sida lagu waramayo soo dhamaatay ka dibmarkii ay Saacadihii lasoo dhaafay si xowli ah halkaas uga soconaysay. Natiijooyinka hordhaca ah waxay sheegayaan in Barack Obama oo ah madaxweynaha iminka talada dalkaasi haya uu ku guuleysta Doorashada . waxaana guul dareystay Musharaxa Xizbiga Jamhuuriya Mr. Mitt Romney oo [...]
Mogadishu (Alshahid)- Xarunta Cilmi-baarista iyo Diraasaadka Saxaafadda ee Alshahid ayaa maanta furtay Kulan Aqoon-is-waydaarsi looga hadlayo sida loo diyaariyo Qorsheynta Istaraatiijiyadeed (Stratigic Planning), iyadoo Furitaanka Kulankana ay kasoo qayb galeen mas’uuliyiinta Xarunta iyo Marti-sharaf kale. Ugu horeyntii Madaxa Xafiiska Muqdisho ee Xarunta Alshahid Mudane Cabdiraxmaan Maxamed ayaa hadal furitaan ah ka jeediyay Hoolka Shirarka ee [...]
Dubai (Alshahid)- Ururka Al-Qacida ayaa mar kale fariin dardaaran ah usoo diray Xarakada Alshabab ee ka dagaalanta Somalia isla markaana ah Koox lagu tiriyo inay xiriir la leedahay Al-Qacida. Fariintan oo ahayd Cod lagu baahiyay Shabakado Islaami ah oo Internetka ka dhisan ayaa waxaa soo diray hogaamiyaha ugu sareeya Al-Qacida Sheikh Ayman Al-Tawahiri. Sheikh Al-Tawahiri [...]
Mogadishu (Alshahid)-Waxaa lagusoo gaba-gabeeyay Hoolka Shirarka ee Xafiiska ay Muqdisho ku leedahay Xarunta Cilmi-baarista iyo Diraasaadka Warbaahinta ee Alshahid Tababar Laba maalmood soconayay oo Wariyayaal loo qabtay. Tababarka oo Shalay lasoo gaba-gabeeyay ayaa wuxuu furmay Maalintii Salaasada , waxaana kasoo qayb galay ku dhawaad 20 Wariye iyo shaqsiyaad kale oo dhaq-dhaqaaq muuqda ku dhex leh [...]
London (Alshahid)- Maanta waa 21/October waaa maalinkii uu dalka Somalia ka hirgalay kacaankii ciidamadu hogaaminayeen. Hadaba waa muhiim in aan xasuusno Kacaankaas oo dalka Somalia ka hirgaliyay hormaro badan oo la taaban karo. Sidoo kale kacaankaas waxaa lagu eedayaa in uu kow ka ahaa bur burkii dalka. Hadaba aniga oo maanta Xusaya Maalintaan Taarikhiga [...]
Mogadishu (Alshahid)- Waa iska caadi in marar badan la maqlo dad u doodaya ilaalinta xuquuqda saxafadda ama saxafiga, laakiin waxaa is weydiin mudan, maxaa laga yeelayaa hadii saxaafaddi ama suxufigiba ka shaqeeynayo argagixinta bulshada ama uu noqdo shiddo iyo baas-abuur. Mase jirtaa xuquuq iyo waajibaad saaran saxaafadda ama suxufiga oo looga fadhiyo inuu ilaaliyo? Jawaabta [...]
Beled-Wayne (Alshahid)- Waxaa wali ka soconaya magaalada Beled-Wayne ee xarunta gobalka Hiiraan Barakaca ay samaynayaan dadka deegaanka ka gadaal markii Wabiga Shabeele uu Biyo badan kusoo fatahiyay gudaha magaalada. Fatahaadda Wabiga oo sida la sheegay ka dambeysay Roobab xoog leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da’ayay halkaas ayaa waxaa ka dhashay burbur soo gaaray [...]